မြန်မာ/အင်္ဂလိပ် အဘိဓါန် | Danya Wadi
Posted by danyawadi on March 6, 2014 in အင်္ဂလိပ်စာကဏ္ဍ
You are browsing the search results for: မြန်မာ အင်္ဂလိပ် အဘိဓါန်.
English အင်္ဂလိပ် – မြန်မာ အဘိဓါန်
By danyawadi February 12, 2012
English Type/Myanmar _natured (forming compound adjs) adj စိတ် သဘောထားရှိသော။ good -natuerd. _nosed (forming c ..သော နှာခေါင်း ။ -’s suff ကပိုင်ဆိုင်သူဧကဝုစ်ဖြစ်ကြောင်းပြနောက်ဆက်။ ခတစ်စုံတစ်ခုသော အိမ်၊ဆိုင် စသည်သက်ဆိုင်မှုပြနောက်ဆက်။ နှင့်အဆုံးမသတ်သောဗဟုဝုစ်နာမ်များတွင်ပိုင်ဆိုင်မှု၊သက်ဆိုင်မှုကိုပြနောက်ဆက်။ ရံဖန်ရံခါတွင်ဗဟုဝုစ်ကိန်းသို့နာမ်ဖန်တီးရန်ထည့်သည့်နောက်ဆက်။ အစားအတိုကောက်။ နှင့််ကိုကိုယ်စားပြုသည့်နောက်ဆက်။ -ana suff (ရှေ့ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်၊ ဒေသ စသည်တို့နှင့် တစု တပေါင်းတည်း ဖြစ်သော အရာဝတ္ထု၊ ပစ္စည်းကို ပြသော နောက်ဆက်စကား)။ -ance suff (ကြိယာကို နာမ်ပုဒ်ပြောင်းပေးသော နောက်ဆက်)။ … ခြင်း၊ … မှု စသည်။ -cidal coidmb သတ်မှုနှင့် ဆိုင်သော။ -cide coidmb သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ […]
မြန်မာ – English အင်္ဂလိပ်- အဘိဓါန်
မြန်မာ အမျိုးအစား အင်္ဂလိပ် ကကတိုး n fork-tailed catfish ကကတစ် n giant sea perch ကကြိုး n 1.hardness 2. music for dance ကကြိုးတန်ဆာ n caparison ကချေသည် n professional dancer ကစားကွက် n game tactic ကစားကွင်း n playground ကစားခုန်စား n spots and games ကစားစရာ n toy, playing thing ကစား စရာဆိုင် n toyshop ကစားဒိုင် n banker ကစားဖော် n playmate ကစားဝိုင်း n gambling […]
← အင်္ဂလိပ်စာဆရာကြီးမောင်မောင်ဝမ်း၏အင်္ဂလိပ်စာ ပို့ ချ နည်း အ သွယ် သွယ်
“ပသီ ဘယ်သူလဲ ဘာလဲ” →